Web Scraping amin'ny Expert Expert
Teknika nampiasaina tamin'ny manaisotra angona avy amin'ny tranokala. Ny rindrambaiko finday web dia afaka miditra amin'ny tranonkala mivantana amin'ny HTTP na tranonkala iray. Na dia azo ampiasaina amin'ny mpampiasa rindrambaiko aza ilay dingana, ny ankapobeny dia miteraka fomba amam-panaovana automatique ampiasa amin'ny web crawler or bot.
Ny famafazana tranonkala dia dingana iray rehefa arotsaka ao amin'ny tranokala ny angon-drakitra voatahiry ao anaty tahiry iray ho an'ny fanadihadihana sy ny fikarohana. Midika izany ny fametrahana pejy web ary ny famoahana ny votoatiny. Ny votoatin'ny pejy dia azo averina, mikaroka, manavao ary ny angon-drakitra napetraka ao anaty fitaovana fitehirizana ao an-toerana.
Ny tranokala dia ankapobeny avy amin'ny fiteny fanoratana amin'ny endritsoratra, toy ny XHTML sy HTML, izay ahitana ny antontam-baovao tena ilaina amin'ny endritsoratra. Na dia izany aza, maro amin'ireo tranonkala ireo dia natao ho an'ny mpampiasa ny olona-fa tsy amin'ny fampiasana azy. Izany no antony nahatonga ny rindrambaiko matevina.
Misy teknika marobe izay azo ampiasaina amin'ny fanasitranana tranonkala mahomby. Ny sasany amin'izy ireo dia novolavolaina etsy ambany:
1. Ny kopia an-tsoratra
Indraindray, na ny fitaovana maoderina tsara indrindra aza dia tsy afaka manolo ny fahamarinam-pamokarana sy ny fahombiazan'ny kopia-and-paste ny boky..Izany dia azo ampiharina amin'ny toe-javatra misy ny tranokala mametraka sakana mba hisorohana ny automation automatique.
2. Fitsipika an-tsoratra
Ity dia fomba tsotra nefa mahery vaika ampiasaina hanangonana ny angona avy amin'ny tranonkala. Mety mifototra amin'ny baikon'ny greve UNIX izany na fitenenan'ny fiteny iray amin'ny fiteny iray, ohatra, Python na Perl.
HTTP Programming dia azo ampiasaina ho an'ny pejy web na static. Ny angon-drakitra dia navoaka tamin'ny famoahana HTTP fangatahana amin'ny serivisy tranonkala an-tserasera tamin'ny fampiasana programa socket.
Maro ireo tranonkala no manana tranokala be dia be azo avy amin'ny loharanom-pahefana fototra toy ny tahiry. Eto, ny angon-drakitra misy ny sokajy mitovy dia sokajina ho pejy mitovy. Amin'ny famakafakana HTML, dia fandaharanasa iray amin'ny ankapobeny no mahita ny môdely toy izany ao amin'ny loharanom-baovao manokana, mamerina ny ao anatiny ary avy eo dia midika izany ho endrika endrika afiliana, izay antsoina hoe fanakonana.
5. Fandalinana ny DOM
Ao anatin'ity fomba ity, ny programa dia mametraka ao anaty tranonkala iray feno tanteraka, toy ny Mozilla Firefox na Internet Explorer, mba haka ny votoatim-piraketan'ny rakitra client client. Ireo browsers ireo dia afaka manadihady ny tranokala ao amin'ny tranokala DOM ihany koa arakaraka ny fandaharana izay afaka manaisotra ampahany amin'ireo pejy.
6. Ny fankatoavana an-tsoratra (seminera)
Ireo pejy tianao hotsaroana dia mety handefa marika famantarana sy fanamarihana na metadata, izay azo ampiasaina mba hitadiavana snippets manokana. Raha ampidirina ao amin'ny pejy ireo fanamarihana ireo, dia azo raisina ho toy ny tranga manokana amin'ny famakafakana DOM ity teknika ity. Ireo fanamarihana ireo dia mety ho voalamina ihany koa amin'ny sehatr'asa, ary avy eo mamaham-peo sy mitantana avy amin'ny tranonkala. Izany dia mamela ny mpanodina hamerina ny sora-pitenenana sy ny baiko avy amin'io sary io alohan'ny hanapahany ny pejy Source .